कति तापक्रमसम्म बाँच्छ कोरोना ? वैज्ञानिकले पत्ता लगाए अर्को रोचक तथ्य – Koshidaily
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यकति तापक्रमसम्म बाँच्छ कोरोना ? वैज्ञानिकले पत्ता लगाए अर्को रोचक तथ्य
१९ बैशाख २०७७, शुक्रबार १४:३९ प्रकाशित
काठमाडौं । केही समय अघिसम्म मानिन्थ्यो कि जसरी तापक्रम बढ्दै जान्छ, कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोप अन्त्य भएर जान्छ । चीनको हुवेई प्रान्त (उहान शहर) मा सुरु भएको उक्त प्रकोपको केही समय त त्यही आशामै बितेको थियो ।
धेरै तापक्रम हुने देशहरुले त सुरुमा देशहरुले आफ्नो देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलने दाबी गर्दै आएका थिए । हुन पनि अधिकांश भाइरसहरु जाडोयाममा सक्रिय हुन्छन् । मौसम परिवर्तनको समयमायिनीको सक्रियता झनै बढ्छ ।
पछिल्लो समय गरिएकाे एक अध्ययनमा विश्वमा महामारीको रुप लिएको कोरोनाभाइरस उच्च तापक्रममा पनि लामो समयसम्म बाँच्न सक्ने देखिएकाे छ । फ्रान्समा वैज्ञानिकको एउटा समूहले गरेको शोधमा उक्त कुरा पत्ता लागेकाे हाे ।
दक्षिणी फ्रान्सको आइएक्स मार्सीले विश्वविद्यालयका प्रोफेसर बोरिस पास्टोरिनोले आफ्नो साथीहरुसँग मिलेर गरेका उक्त अध्ययनमा कोभिड–१९ लगाउने सार्स–कोभ–२ भाइरस ६० डिग्री सेल्सियस (१४० डिग्री) फरेनहाइटमा पनि १ घण्टासम्म बाँचेको फेला पारेका थिए । त्यो भाइरसलाई ल्याब्रेटोरीको सेटिङमा मार्नका लागि उनीहरुले त्यसलाई १५ मिनेटसम्म ९८ डिग्री सेल्सियस (१९७ डिग्री फरेनहाइट) तापक्रममा तताउनु परेको थियो।
उनीहरुले नोबेल कोरोनाभाइरसलाई निस्क्रिय बनाउनको लागि कति तापक्रम र कुन रसायनको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने सिलसिलामा उक्त कुरा पत्ता लगाएका हुन् । खासगरी, उनीहरु नोबेल कोरोनाभाइरसको नियमित सम्पर्कम आउने प्रयोगशालाका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भाइरसले पार्न सक्ने असरको खतराबारे पनि बुझ्न चाहन्थे ।
‘कोभिड–१९ को भाइरस संक्रमितको रगतमा पनि पाइन्छ । त्यहीकारण त्यसको सेरोलोजिकल टेस्ट शुरु गर्नुअघि त्यसलाई निष्क्रिम पारिनुपर्छ’ उनीहरुले भनेका छन् । तर त्यसो गर्नका लागि कुन उपाय सही हो भन्ने अझैसम्म स्थापित भइसकेको छैन ।
यो परीक्षणका लागि ती वैज्ञानिकहरुले अफ्रिकामा पाइने एक जातको बाँदरको किड्नीलाई यो भाइरसले संक्रमित गरेका थिए । त्यसका लागि आइसोलेसनमा बसेका एकजनाको शरिरबाट भाइरस लिइएको थियो । यो भाइरसलाई दुईवटा अलगअलग ट्युवमा भरियो । छुट्टाछुट्टै परिवेशमा यसको तापक्रम बढाइयो ।